Xassan Daahir oo xabsi galay kadib muran saacado socday. |
Xassan Daahir oo xabsi galay kadib muran saacado socday.
Sheekh Xassan Daahir Aweys oo ahaa hogaamiye in badan dagaal aan lagu guuleysan waday ayaa habeenkii xalay ahaa u hoyday xabsi ay maamulnaan ciidamada Gaashaan oo qeyb ka ah nabad-sugidda Soomaaliya kadib markii Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde oo hogaaminaya wufuudii ka keentay Cadaado uu isku dayay in uu guriga Muqdisho uu ka deganyahay u wato Xassan Daahir oo maamulka dowliga ah uu dhinac maro.
Diyaarada waday Xassan Daahir oo Muqdisho soo gaartay 7:20 daqiiqo ayaa waxaa ka danbeeyay buuqa dhex maray masuuliyiinta dowlada ka socatay iyo qolyaha waday oo gaaray ilaa saqdii dhexe ee xalay xilligaas oo wasiirada arimaha gudaha, gaashaan-dhigga iyo taliyaha nabad-sugidu ay qaateen go’aan ah in aan la dhageysan odayaasha qeylinaya ee xabsiga la dhigo xassan Daahir cidii soo daba kacdana la garaaco.
Odayaasha la garaacay waxaa la sheegay in ay kamdi yihiin Afhayeenka odayaasha Hawiye Axmed Diiriye Cali, Ugaaska beesha Ceyr, Cabdi Daahir Cabdi Nuur, iyada oo xildhibaan cabdul-qaaadir cali Cumar isna six un loo garaacay.
Tilaabada Xassan Daahir lagu xiray odayaasha, siyaasiyinta iyo xildhibanada lagu garaacay ayaa waxaa aad u canbaareeyay gudugii Xassan Dahir ka keenay Cadaado oo sheegay in ay ahayed arin aan wanaagsaneyn oo dowladu ku qiyaantay iyaga.
Si kastaba lama oga sida xaalku noqon doono maadaama Xassan Daahir Aweys uu gacanta ugu jiro ciidamada Gaashaan oo la aaminsanyahay in ay hoos tagaan dowlada Mareykanka oo iyadu horay u dalbatay in Xassan Dahir loo gacan geliyo.